Midnimo & Waxqabad (Daryeel) – DARYEELRELIEF
Midnimo iyo waxqabad waxyaabaha ay ku caan baxdey oo aad ka heleysid waxaa ka mid ah:Xiriirinta ehelka, Midnimada,Duceynta qalbi wanaagsan siddaQofka xanuunsan ama xaajaad lasoo dersaan,Qofkay geeri ku timaado markiiba loo duceeyo oo lagana warqabo oo horey aynaan u haysan iwm.
Bixinta sadaqaadka Iyadoo qofkii $1 sadaqaysta shanta qaarad looga ducaynayo.Sidaa darteed walaalayaal kasoo wardoon adigaanba moogaan karin markaa kadib,Waxaa lagu bilaabey lacago yabooh ah oo qorshihii 5-ta sano aheyd ee kun-laha iyo boqolka qof. (25/09/14-15/01/15)
Allah mahadis si dhaqso ah waxaa noogu buuxsamay numberkii kadibna waxaa xigtay aruurintii lacagta. Oo maanta maraysa meel fiican (56-qof) . Inta dhimana rajo baa laga qabaa. Intii yaboohintu socotay waxaa jirtay lacago farobadan oo dadka qololka kujira qaarkood si hoose ubixiyeen sida agoomo dhib laga soo sheegay (mudug iyo Gedo) dad xaalado caafimaad ubaahnaa.Kaqeyb qaadashadii tawn planeka Degmada saaxo,dhismihii mamulka saaxo iyo Dhismihii golaha guurtida iwm.
Kadib waxaa bilaabatay yaboohinta lacago lamacag baxday dhiig joojinta. Oo iyana meel fican maraysa. Ugu danbeyntii waxaan rabaa inaan dhamaan walaalahay aan xasuusiyo dhawr arimood.
1. Waad ku mahadsantihiin abaabulka aad iyo kacdoonka aad wadaan.
2. Ha niyad jabina dadkeena waxaa lagu xantaa ineey caadifad badanyihin, Laakiin ay niyad jabi ogyihiin.
3.dariiqa aan hayno wuu dheeryahay samir iyo dulqaad aan muujino.
4.Allah aan ukaashano arimaheena.
5.carabkeena aan dabcino .
6.dadkena aan war galino meel walba ooy joogaan tusaale. gabdhaheena Caalamka kala jooga $250 bixinkaraaad bay u badan yihiin.
7.Raga dumarkaa ka adag marka si hoose ula xiriira oo public facsharka ka daaya.
8.dhamaan lacagihii hoos hoosta loo bixiyay ragaa bixiyay intooda badan.
9.raga culaysyo badan baa saaran oo kabaxsan qolalka mida kasocota.
Walaalayaal aynu kadig toonaadaan arimahan oo ah Waxyaabaha ugu daran ee mashcruuc fashiliya
1. Ikhlaas la .aan
3. Hubsiino la aan
4.hagar bax la aan
5. Hogaan la aan
6 . Tashi la aan
7. Kala danbayn la aan
Waxaan ilaah ka rajaynayaa in mashruucayago ka nabad qabo inta aan sheegay marka laga reebo ” dagdaga ” kaasna aan ka digtoonaano .
waxaa jirto qaacido – erayo ay ku fadhido diintu –
Oo ah( من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه )
Macnaha : ” ruuxii dagdagsada shay aan waqtigiisii la gaarin waxaa lagu ciqaabaa in uu waayo shaygiiba ” Sida nin rartay qurbac hal sano jir ah oo sugi waayey inta uu u korayo
Wuu ka garba beelaa ama bakhtiyaa
Ama geeri ama guul . Midnimo iyo Waxqabad
Daryeel Relief & Education Org.